Manchester United Waxay Yeelan Doontaa Dhexda Ugu Wanaagsan Premier League Haddii Ed Woodward Uu Lasoo Saxeexdo Labadan | Dhexnimo Media
Home Ciyaaro Manchester United Waxay Yeelan Doontaa Dhexda Ugu Wanaagsan Premier League Haddii Ed...
Manchester United Waxay Yeelan Doontaa Dhexda Ugu Wanaagsan Premier League Haddii Ed Woodward Uu Lasoo Saxeexdo Labadan
Manchester United Waxay Yeelan Doontaa Dhexda Ugu Wanaagsan Premier League Haddii Ed Woodward Uu Lasoo Saxeexdo Labadan Ciyaartoy
Manchester United waxay ku jirtaa mid ka mid ah suuqyadii ugu xumaa ee xagaaga, iyadoo ku guuleysan la’ saxeexyadii ay doonaysay intoodii badnaa. Jadon Sancho, Jack Grealish iyo Kalidou Koulibaly ayaa dhamaantood ay Red Devils doonaysay, laakiin illaa hadda midkoodna ma imanin.
Warka ugu wanaagsan ee ay jamaahiirtu heleen wuxuu noqday, in Manchester United ay lasoo saxeexatay kubbad-sameeyaha kooxda Ajax iyo xulka qaranka Netherlands ee Donny van de Beek iyo in ay Liverpool kula tartamayso laacibka reer Spain ee Thiago Alcantara oo bilooyinkii ugu dambeeyey ba la sheegayo inuu kusii jeedo Anfield. Haddii labadan ciyaartoy uu helo tababare Ole Gunnar Solskjaer, waxay Manchester United noqon doontaa kooxda ugu dhexda wanaagsan guud ahaan kooxaha horyaalka Premier League.
Helitaanka xiddigahan oo midkood ay haddaba gacanta ku dhigeen, waxa ka horreysa shaqo badan iyo inay diyaar la noqdaan lacagta ay Thiago Alcantara ku xidhay Bayern Munich oo ay 30 milyan oo Euro, waxay awood u yeelan kartaa inay Liverpool ka hor qaaddo inkasta oo damaca laacibkan oo qandaraaskiisa Bavaria hal sano ka hadhsan yahay uu yahay inuu ka hoos ciyaaro Jurgen Klopp.
Chelsea ayaa si weyn isku dhistay xili ciyaareedka oo aan bilaabmin, waxaanay diyaarsatay hubkii ay ku garaaci lahayd Manchester United, Manchester City, Liverpool iyo kooxaha kale, iyadoo lasoo saxeexatay Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva iyo Malang Sarr. Waxa kale oo ay Blues u dhow dahay inay lasoo wareegto Kai Havertz oo la sheegayo inuu maalmaha soo socda soo gaadhi doono magaalada London.
Arsenal ayaa iayduna si fiican isku hubaysay, waxaanay lasoo wareegtay xiddigii Chelsea ee Willian oo heshiis xor ah ay ku qaateen, halka Gabriel Magalhaes ay heshiiskiisa dhamaystireen oo uu difaaca ka xoojin doono safka tababare Mikel Arteta xili ciyaareedka dambe.
Manchester City dhinaceeda may fadhiisanin, waxaanay lasoo saxeexatay difaacii Bournemouth ee Nathan Ake, si ay iskaga xoojiso difaaca oo ahaa meelihii ay ka wiiqnayd xili ciyaareedkii hore ee Liverpool ay koobka kaga qaadday dhibcaha rikoodhka ah. Waxa kale oo ay lasoo wareegtay Ferran Torres oo garabka weerarka ah, halka Lionel Messi ay ku raad-joogaan.
Haddaba, heshiiska Manchester United ay la gashay Donny van de Beek, waxa uu siinayaa Solskjaer inuu iska garab ciyaarsiiyo laacibiinta ugu tayada badan khadka dhexe marka ay garabkiisa istaagaan Paul Pogba iyo Bruno Fernandes, laakiin inay helaan Thiago Alcantara oo la ogyahay kubbad hayntiisa iyo baaskiisa quruxda badan, waxay United gaadhsiinaysaa heer ka sarreeya kooxaha kale.
Van de Beek waxa uu yahay laacib hal-abuurkiisu heersare yahay, indho furan oo goolashana dhaliya, waxaanu xili ciyaareedkii hore saxeexay 10 gool iyo 11 kale oo uu caawiye uga noqday Ajax.
Bruno Fernandes oo bishii January yimid Old Trafford, ayaa u dhaliyey siddeed gool iyo toddoba caawimood, tiradaas oo lagu daray inta uu Van de Beek usoo dhaliyey ama soo caawiyey Ajax, waxay United siinayaan inay helaan kubbad-sameeyeyaal ka goolal badan weeraryahanno badan.
Dhinaca kale, Nemanja Matic, Fred iyo Scott McTominay ayaa boosas la’aan noqon doona haddii Thiago Alcantara iyo Van de Beek ay Old Trafford kusoo biiraan, waxaanay Red Devils ku qasbanaan doontaa inay iska fasaxdo qaar ka mid ah laacibiintan.
Previous articleMaraykanka oo joojinaya dhaqaalaha uu siiyo Ethiopia
Next articleKubbad-Burburiyaha Ugu Wanaagsan Dunida Ee N’Golo Kante Oo Amaah Lagu Doonayo – Miyey Chelsea Ogolaanaysaa?